काठमाडौँ । यौन प्राणीको प्राकृतिक आवश्यकता हो । यौन क्षमता बढाउन कतिपय मानिसहरुले ‌औषधी समेत प्रयोग गर्ने गर्छन् । बजारमा पाईने अनेकथरी औषधी सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यौनशक्ति बढाउ बजारका औषधी भन्दा घरेलु उपाय उत्तम मानिन्छन् । नियमित किसमिस र ओखर सेवन गरेमा यौनशक्ति बढ्छ । गाँजरमा भिटामिन ‘ए’को मात्रा अत्याधिक हुने भएकाले यसको सेवनले पनि यौनशक्तिलाई वृद्धि गराउँछ ।…विस्तृत समाचार »
दिनमा एउटा अमला खानुस् : क्यान्सरबाट जोगिनुस्
काठमाडौं । अमला भिटामिनले युक्त फल हो । जसको नियमित सेवनले विभिन्न रोगहरु हटाउन सकिन्छ । एउटा अमलामा ६ सय मिलि ग्राम भिटामिन सी पाइन्छ । भिटामिन सीका अन्य स्रोत जस्तै कागती वा सुन्तला हावा वा घामको सम्पर्कमा आएपछि यसमा पाइने भिटामिन सी कम हुन्छ तर अमला एउटा यस्तो स्रोत हो जसमा भिटामिन सी सधै रहिरहन्छ । दैनिक एउटा अमला खाँदा शरीरमा हुन्छन् यी फाइदा …विस्तृत समाचार »
​लिपिस्टिक लगाउँदा हुन्छ क्यान्सर
काठमाडौं । महिलाहरु आफ्नो सौन्दर्यलाई लिएर बढि चनाखो हुँने कारणले उनीहरु श्रृंगारपटारमा ध्यान दिन्छन । मेक अप गर्दा महिलाहरु लिपस्टिकलाइ प्राथमिकताका साथ लिने गर्दछन् । तर तिलिपस्टिक के बाट बन्छ, यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । आफूले लाउने लिपिस्टिकले स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने बारेमा भने उनिहरु जानकार छैनन । केही समयअघि अमेरीकामा गरिएको एक अध्यननले लिपिस्टिक प्रयोग गर्ने महिलाको…विस्तृत समाचार »
२० माघ, काठमाडौं । बिहान उठेपछि खाली पेटमा एसिडको मात्रा अत्याधिक हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा बढी एसिडिटीयुक्त खानेकुरा खाँदा शरीरको पाचनशक्तिमा गढबढ आउँनसक्छ । थाहापाउनुस् विहान खाली पेटमा खान नहुने यी चीज ग्रीन टी वा चिया धेरैजसो व्यक्ति विहान उठेपछि ग्रीन टी वा चिया पिउने गर्छन् । यसले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्छ । चियामा रहेको कैफीन तत्वबाट शरीरमा एसिडको मात्रा बढ्न जान्छ र यसले…विस्तृत समाचार »
उचित सेक्सको सिधा प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्यमाथि पर्छ । विल्किस युनिभर्सिटीका बैज्ञानिकहरुका अनुसार सातामा एक वा दुई पटक सेक्स गर्नाले इम्यूनोग्लोविन नामको एन्टिबडीमा बृद्धि हुन्छ । ११२ विद्यार्थीमा गरिएको अनुसन्धानबाट सर्दी जस्तो इन्फेक्सन रोक्न सहयोग पुग्ने पत्ता लागेको छ । स्कटल्याण्डका अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार सेक्सबाट शारीरिक स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पुग्छ । यस्ले एक त रक्तचाप नर्मल रहन्छ भने अर्को मानसिक तनावमा कमी आउछ । २४ महिला र…विस्तृत समाचार »
होसियार ! चुम्बन गर्दा सर्न सक्छन् यी रोग
काठमाडौं । चुम्बन मायाको पर्यावाचीको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । विशेषगरी जोडीको प्रेमको पहिलो निशानीको रुपमा यसलाई लिइन्छ । युवायुवती बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन चुम्बनले भूमिका खेल्छ । यसले मानसिक स्थिरता अनि शारिरीक सामिप्यता बढाउँछ । तर चुम्बनका बेफाइदा पनि छन् । चुम्बन गर्दा मुख, जिब्रो सम्बन्धि रोगको खतरा रहन्छ । संक्रमण सर्ने खतरा : चुम्बनका क्रममा पनि एक व्यक्तिबाट अर्कोमा संक्रमणको खतरा हुन्छ ।…विस्तृत समाचार »
१४ माघ, काठमाडौँ। डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वभर सन्त्रास फैलाइरहेको छ। चीनबाट सरू भएको उक्त भाइरस क्रमश: एशियाको अन्य देशहरूमा पनि फैलिइरहेको छ। जापान,थाईल्यान्ड र दक्षिण कोरियामा भाइरस फैलिएको स्वास्थ्य सस्थाहरूले जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिममा नेपाल पनि रहेको छ। जेखिम बढेसंगै सरकारले सर्तकता बढाएको बताएको छ। भाइरसहरूको एक ठूलो समूह नै कोरोना हो । कोरोना पशुहरूमा सामान्य हुन्छ तीनै…विस्तृत समाचार »
बच्चाको उचाई बढाउने सजिलो उपाए
९ माघ, काठमाडौं । बच्चाको सम्पूर्ण विकासका लागि दूधका साथै दूधबाट बनेका परिकारहरु पनिर, मख्खन, चीज, दही जस्ता खानेकुराको जरुरत हुन्छ जसमा प्रोटिन तथा क्याल्शियम हुन्छ । जसले बच्चाको मांशपेशी र हड्डी बलियो बनाउनुका साथै उचाइ बढ्नमा मद्दत गर्छ । साथै यी उपाय अपनाए पनि बाच्चा चाँडै बढ्छन् । १. बढ्दै गरेका बालबालिका निद्रा पुग्ने गरी सुतेका छन् कि छैनन, ध्यान दिनुहोस् । उनीहरुका लागि…विस्तृत समाचार »
महिलाहरुले किन मन पराउँदैनन पुरुषको दाह्री !
काठमाडौं । केही समय अगाडि क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रड्यु पहिलोपटक दाह्रीमा देखिँदा अधिक चर्चामा आएका थिए । उनको नया ‘लुक’ तत्कालै ट्वीटरमा नम्बर १ मा ट्रेन्डिङ भएको थियो । यसरी पछिल्लो समय पुरुषहरुले दाह्री पाल्ने चलन अधिक लोकप्रिय भएपनि कतिपय महिलालाई भने दाह्री आकर्षक लाग्दैन जसपछाडिको कारण वैज्ञानिकहरुले पहिलोपटक पत्ता लगाएका छन् । दाह्रीले मान्छेलाई सुन्दर बनाउने वा कुरुप देखाउने भन्ने पुरुषहरुमै निर्भर हुन्छ धेरै…विस्तृत समाचार »
४ माघ, काठमाडौं । चीनमा देखिएको रहस्यमय भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएको अनुसन्धानकर्ताले बताएका बीबीसीले जनाएको छ । ४१ जनामा नयाँ भाइरस पुष्टि भएपछि बेलायती वैज्ञानिकले भने झण्डै १ हजार ७ सय नागरिक संक्रमित भएको अनुमान गरेका छन् । गएको डिसेम्बरमा चीनको वुहान शहरमा देखिएको भाइरसबाट अहिलेसम्म दुई जनाको ज्यान गैसकेको छ । नयाँ…विस्तृत समाचार »